Njengamanje, imikhiqizo ehlukahlukene yokudla iyaziwa kakhulu. Abantu abaningi bacabanga ngaleyo ndlela. Ziwumkhiqizo wokudla oqukethe amavithamini, amafutha, ama-amino acids, amaprotheni, namaminerali ahlukahlukene. Isisekelo salo yizinhlayiya nama-flakes of okusanhlamvu, njenge-oats, ukolweni kanye ne-rye. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile bafaka amantongomane nezithelo zomisiwe. Ukuqonda izinzuzo nokulimala kwe-muesli, ukwakheka kwalo mkhiqizo kuzosiza.
Njengomthetho, lo mkhiqizo wokudla uyisici sesidlo sakusasa, njengoba unikeza umuntu onamandla usuku lonke. Kukholelwa ukuthi lokhu kuyisidlo sasekuseni okulinganiselayo. Cishe bonke bangasebenzisa i-muesli njengento eyinhloko yemenyu yamanje. Lo mkhiqizo ubaluleke kakhulu kulabo abazama ukufeza isibalo esihle, ngoba kukhona ngisho nokudla ku-muesli. Iqiniso liwukuthi amafayili okudla angena ekubunjweni kwawo agcinwa isikhathi eside ngokwanele, ngaleyo ndlela adonsa umuzwa wendlala. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuthuthukiswa kwenqubo yokugaya ukudla ngokwayo, ukulahlwa kwe-toxin, i-toxins ne-cholesterol. Futhi, abantu ababhekene nokucindezeleka komzimba kanye nezifo zenhliziyo, nakanjani kudingeka badle muesli. Ukuzuza kanye nokulimala kwalesi mkhiqizo kunqunywa into ebaluleke kakhulu kuyo - i-fiber. I-fibre ibaluleke kakhulu ekuqaliseni yonke imigwaqo yamathumbu, kodwa ngezifo ezithile kufanele isetshenziswe ngokuqapha.
Izinzuzo namaHlomu we-Muesli
Ukuthenga lo mkhiqizo, kufanele uqaphele amaphuzu ambalwa ayisihluthulelo. Akudingekile ukuba ugxile kuphela ekuthandweni kwakho kokuncintisana. Isibonelo, i-muesli enosawoti iyingozi kakhulu kubantu abahlale bekhathazekile ngokucindezela kwegazi eliphezulu. Uma ufuna ukulahlekelwa isisindo, ke ungabeki emanzini ngamaju, ushokolethi noma amantongomane. Uma uzama ukuqeda amakhilogremu engeziwe, khona-ke uthenge lezo ishukela eziqukethwe izithelo ezomile kuphela. Kuyadingeka ukuthi lo mkhiqizo ube ngaphandle kokunambitheka kanye nezithasiselo ezihlukahlukene. Ngokucophelela udinga ukuthatha ushukela, uma unesifo sikashukela. Abashukela abayisifo sikashukela baye bahlakulela i-muesli ekhethekile elinezinhlobonhlobo ezihlukahlukene ezicutshungulwayo. Qaphela lapho uthenga i-muesli ngezithelo ezishisayo! Njengomthetho, izithasiselo ezinjalo zicutshungulwa ngosizo lwesulfure, ezingathinta impilo yakho. Ngakho-ke, izinzuzo kanye nokulimala kwe-muesli ikakhulukazi kunqunywe yizingxenye ezakha ukwakheka kwazo. Ukwandisa inani lokudla okunomsoco, ungawafaka ekomini noma emikhiqizweni yobisi omuncu. Kuyasiza kakhulu ukwengeza lo mkhiqizo ngamajusi ahlukahlukene, ikakhulukazi okufakwe ngokushesha. Phela, ama-juice ane-vitamin C.
Uma unquma ukuqala usuku lwakho ngengxenye ye-muesli, bese ubeka ngokuziphendulela kakhulu ekukhethweni kwalo mkhiqizo. Ukusetshenziswa nokulimala kwe-muesli kunqunywa isimo sezempilo yabantu. Abantu abanezifo zesisu abacecisiwe ngoba badinga ukufakwa emanzini afudumele, futhi nalokhu, kuyabashiya yonke impahla ewusizo. Lapho uthenga lo mkhiqizo, qaphela ukwakheka futhi ukhethe lowo onokudla okuningi kwemvelo.
Izithelo zikaNoni: Izakhiwo eziwusizo nokubukwa kwamakhasimende
Kanjani ukwakha elachitheka ukuze izingulube? Amathiphu izithombe
Indlela yokwenza isihlabathi kinetic ngezandla zakhe: Ukwakheka kanye nobuchwepheshe
Art Medieval kanye nezici zayo
Ungadliwa for abanesifo sikashukela. Ikhekhe abanesifo sikashukela: iresiphi
"Ukuhlala ezifana nempilo," Chukovsky. Isifinyezo ukuhlaziywa